Vest uye tangi misoro → Kushanda mbatya
Inoshanda uye iri nyore kamizelki ndiyo mhinduro kwayo nguva dzese dzemwaka. Kugadzikana kwavo kunovatendera kuti vasanganiswe ne hafu muzhizha uye sweatshirt munguva yechando. Tinokupa iwe zvipfeko zvebasa uye zvipfeko zvekunyevera yakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro.
Sleeveless kupa kupisa kupisa, kupa rusununguko rwekufamba, uye nekuda kwehomwe dzinoshanda, dzinokutendera kuti utore zvinhu zvinodikanwa uende nazvo. Aya maficha anobatsira kuti riite nguvo inokosheswa nevashandisi vemakambani mazhinji nemasangano.
Isu tinopa yakasarudzika mamodheru kubva kuAdler, Stedman, Reis uye Leber & Hollman. Mhando dzakasiyana-siyana dzemavara, hukuru uye akawanda masisitimu anoita kuti mashandisirwo evheti ave anozivikanwa sehembe dzebasa, asiwo zvipfeko zvakavanzika.
Zvekugadzirisa uye kuvaka vashandi, tinokurudzira zvipfeko zvine homwe dzakawanda, kunyanya zvinobatsira kuchengetedza zvinhu zvidiki. Idzo mbatya dzinochengetedza kugadzikana kwavo kwenguva refu nekuda kwekushandisa kwemhando yepamusoro zvigadzirwa.
Izvo zvigadzirwa zvinogadzirwa, pakati pevamwe yakagadzirwa nekotoni uye polyester, mamwe zvakare ane mamwe ekugadzirisa. Kune vanhu vanoshanda mumamiriro ezvinhu ane njodzi, isu tinopa zvipfeko zvekuchengetedza mumayera ekunyevera ane zvinhu zvinoonekera.
Nyevero zvipfeko izvi zvipfeko zvekudzivirira zvehunyanzvi zvinowedzera kuoneka. Pamusoro pezvo, iwo akasonerwa-mukati anoratidza matepi anokonzeresa pakuonekwa kuri nani mune yakaoma mamiriro ekunze. Mavhoti anoshandiswa zvakanyanya pakati pevashandi vemaoko, vamiririri vevashandi vemumigwagwa, asiwo pakati pevanofarira zvemitambo, vatori vechikamu chekufora, vashanyi, uye vana vechikoro nevechidiki.
Zvigadzirwa zvedu zvinosangana nezvinodiwa zvese zviri pamutemo. Paunenge uchisarudza vesti, zvakakosha kuti unyatsogadzirisa iyo kusvika pakukwirira kwako, sezvo mitsara yekuratidzira inofanira kunge iri padanho remwenje yemota. Kukwana kwakaipa kunoguma nekuita kushoma nekuda kwekuchinja kwezvinhu zvinoonekera.
Iwo ekuonekwa mazinga ema vesti anotariswa neEU standard EN 471: 2003, iyo inosiyanisa matatu matanho ekuonekwa:
1, ine yakaderera degree rekuonekwa, anoshandiswa chete mumugwagwa traffic,
2, ine yepakati nhanho yekuonekwa, inosangana nezvinodiwa zvehembe dzekudzivirira,
3, iyo yepamusoro yekuonekwa nguo ine akawanda anoratidza maronda ane hushoma hupamhi hwe5 cm.
Muzvitoro zvedu, tinopa yepamusoro-soro zvipfeko zvechipiri-degree zvakakodzera kushandiswa pabasa.
Tine misoro yetangi makambani akadai saAdler naLeber & Hollman.
Isu tinopa mamodheru emhepo akatsaurwa kunyanya kumwaka wechirimo uye wezhizha uye akaomeswa mamodheru kuti ashandiswe mumatsutso nemwaka wechando mwaka.
Zvichienderana nedhizaini, pane shanduro dzine homwe dzakawanda dzekusarudza kubva, zvichirerutsa basa re, semuenzaniso, fitters kana magetsi. Matangi epamusoro akakwana pane zvezuva nezuva zviitiko, zvichibatsira kuramba uchidziya. Mavara aripo, kusanganisira camo, anotendera iwe kuti uachinjise kune iwo mamiriro uye zvido zveumwe neumwe, semuenzaniso kune masango kana vabati vehove.
Matangi ematangi akagadzirwa nemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvakanyanya iine yekunze polyester dura inodzivirira pamhepo kana kunaya. Mazhinji mamodheru ane akamira-kumusoro makorari ekudzivirira zvirinani kubva kunotonhora.
Vatengi vazhinji vanozvikoshesa kuva wega uye kusarudzika, kunyanya kana vashandi vakaita basa rekumiririra mukutaurirana nevanogona kuita makondirakiti nevatengi.
Sleeveless pamwe nekudhinda isarudzo yakajairwa yekumaka zvipfeko. Uine izvi mupfungwa, funga nzira yemhando yepamusoro yekudhinda isingagadzirise kukuvara, kurasikirwa kwemavara, uye yakanyanya tembiricha kuwacha. Naizvozvo, tinoikurudzira kuti ive yakasimba kuita kwako kombiyuta yemakomputa. Tinokukoka iwe kushanyira yedu online chitoro www.pm.com.pl kana paAllegro "PRODUCER-BHP".
tangi misoro yebasazvipfeko zvebasatangi misoro ine logotangi misoro ine anodhindavakadzi vesti vestimigwagwamajasi ebasa evarumedzivirirozvipfeko zvebasa zvevarumeinsulated basa zvipfekozvipfeko zvebasa zvevarumekuratidza mavheti ebasazvipfeko zvebasabasa zvipfeko Allegrozvipfeko zvebasa rezhizhainsulated basa zvipfekokuratidza mavheti ebasaOLX basa zvipfekobasa zvipfeko zvine chinyorwachando chebasa zvipfekozvipfeko zvebasashanda zvipfeko zvehembe
5 / 5 ( 10 mavhoti )